Cele News Archives - CeleHits
“Squid Game” ဖိလစ်ပိုင်သရုပ်ဆောင် Christian Lagahit ရဲ့ ကိုရီးယားလူမျိုးများက သူ့အားနိုင်ငံခြားသားဆိုပြီး ရိုင်းစိုင်းစွာဆက်ဆံခဲ့ပုံကိုပြောပြခဲ့
October 27, 2021 by CeleHits
Squid Game တွင် ဖိလစ်ပိုင်မင်းသား Christian Lagahit ဟုလည်းလူသိများသော Player 276 သည် Asian Boss နှင့် အင်တာဗျူးအတွက် မကြာသေးမီက ထိုင်နေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဘတ်စ်ကားတစ်စီးပေါ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အထူးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအပါအဝင် တောင်ကိုရီးယားမှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူကြုံတွေ့နေရတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအကြောင်း သူဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားတွင် သူတွေ့ကြုံရသည့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပုံစံကို Christian Lagahit က သူကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု အများဆုံးဖြစ်ရပ်ကို မျှဝေခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က သူသည် လူများဖြင့် ပြည့်နေသော ရွာလေးတစ်ရွာမှ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးပေါ်က ဆင်းပြေးခဲ့ရပါတယ်။အမှတ်မိဆုံးကတော့ ရွာဘတ်စ်ကားစီးတုန်းကပေါ့။ နောက်ဆုံးခရီးက အရမ်းငယ်တဲ့အတွက် နောက်ကျောမှာထိုင်တယ်။ လူအနည်းငယ်သာ ထိုင်နိုင်သောကြောင့် အခြားလူများက ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် ရပ်နေကြရပါတယ်။ အသက် 50 … Read more
Tale of the Nine Tailed Season (2) မှာမင်းသမီးအဖြစ် Kim So Yeon ( ချောင်းဆော့ဂျင်)အားကမ်းလှမ်းထား
Tale of the Nine Tailed Season (2) ကိုတော့ 2022 ကြရင် tvN ကနေပြသသွားမှာဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းကတော့ ဂျပန်ကိုလိုနီခေတ်မှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းSeason 1မှာပါခဲ့တဲ့ မင်းသား Lee Dong Wook နဲ့ Kim Bum တို့ပြန်လည်ပါဝင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Season 1က မင်းသမီး ပြန်လည်ပါဝင်မှာမဟုတ်တော့ပဲ မင်းသမီး Kim So Yeonကို ကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Kim So Yeonဟာဆိုရင် ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက ထုတ်လွှင့်ပြသလို့ပြီးခဲ့တဲ့ Penthouse season 1,2,3 တွေမှာ ချောင်းဆောဂျင် ကာရိုက်တာနဲ့ အပိုအလိုမရှိသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်း ပရိတ်သတ်တွေ မျက်မြင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Tale of … Read more
ဒရမ်မာအသစ်တွင်အိမ်ထောင်သည် ယောကျားင်္တစ်ဦးနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဇာတ်ရုပ်နဲ့မြင်တွေ့ရမယ့် Running Man အဖွဲ့ဝင် Jeon So Min
Running Man အဖွဲ့ဝင် Jeon So Min ကို လူတိုင်းသိကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ သူမဟာ Gary ထွက်သွားပြီးနောက်မှာအဖွဲ့ ထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာတော့ သိပ်မတွေ့ရတက်ပါဘူး။ ယခုအခါမှာတော့ ဒရမ်မာအသစ်ဖြစ်တဲ့Show Window- The Queen’s House ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းမှာ သူမအားဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းကလေး ဇာတ်ရုပ်နဲ့ မြင်တွေ့ရ မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်း ကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ ရက် 29ရက်နေ့မှာ စတင်ပြသသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။​ Channel A ၏ တနင်္လာနေ့ နှင့် အင်္ဂါနေ့တို့တွင် ပြသနေသော စီးရီးအသစ် Show Window- The Queen’s House သည် အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် ဖောက်ပြန်နေတာကို မသိပဲ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ … Read more
ခင်ပွန်းဟောင်းနဲ့တရားဝင်မကွာရှင်းခင်ကတည်းကအိမ်ကိုယောကျာ်း၃ယောက်ခေါ်လာတဲ့ ဗီဒီယို ပေါက်ကြားသွားခဲ့တဲ့Kim Seon Hoရဲ့EX
October 27, 2021 October 27, 2021 by CeleHits
Kim Seon Ho နှင့် ၎င်း၏ စွပ်စွဲခံထားရသော ရည်းစားဟောင်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် အငြင်းပွားမှုများသည် ချစ်သူဟောင်း၏ ပြောကြားချက်များ၏ တရားဝင်မှုကို မေးခွန်းထုတ်သည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို Dispatch မှ ထုတ်ပြန်လိုက်သောကြောင့် ရှုပ်ထွေးသွားခဲ့ပါတယ်။”Kim Seon Ho… and the 12 လျစ်လျူရှုထားသောအမှန်တရားများ” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ဆောင်းပါးတွင်၊ Dispatch သည် Kim Seon Ho နှင့် ၎င်း၏ရည်းစားဟောင်းနှင့် ပထမဆုံးချိန်းတွေ့သည့်အချိန်မှ လမ်းခွဲချိန်အထိ ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးကို အချိန်ဇယားကို ပြသခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်၊ ‘Dispatch’ သည် Kim Seon Ho ၏ ချစ်သူဟောင်း Choi Young Ah ၏ ကောလာဟလအမည်ကို အသုံးပြုကာ ဤထင်ကြေးပေးမှုများကို အခြေခံ၍ … Read more
Choi Young Ahရဲ့ကိုယ်ဝန်ဟာမင်းသားKim Seon Hoနဲ့ရတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ် များ
Dispatch က Kim Seon Ho ရဲ့ရည်းစားဟောင်း လိမ်လည်မှုကို သက်သေပြခဲ့ပြီးနောက် ကလေးဟာKimနဲ့ရတာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းအင်တာနက်အသုံးပြုသူများကသံသယရှိနေကြပါတယ်…အောက်တိုဘာလ 26 ရက်နေ့မှာ Dispatch ကKim Seon Ho နဲ့သူ့ရည်းစားဟောင်းတို့ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ…. ဒီကိစ္စမှာ သံသယဖြစ်စရာ အချက်တွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်….”Dispatch’ က “2019 နှစ်ကုန်ခါနီးMeeting တစ်ခုမှာ Kim Seon Ho နဲ့ တိုက်ဆိုင်စွာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Choi Young Ah ဟာ 2020 ခုနှစ် မတ်လအစောပိုင်းမှာ Kim Seon Ho နဲ့ စတင်ချိန်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်…. ဒါပေမယ့် သူမဟာတစ်ခုလပ်ဆိုတာကိုနောက်ကျမှဖွင့်ဟခဲ့ပြီး၊ သူမအနေနဲ့ယောကျာ်းလေးတွေနဲ့ပတ်သတ်မြဲရှုပ်နေမြဲကိုKim Seon Hoကိုကအမိဖမ်းမိခဲ့ပြီးနောက် သူမဟာKimကိုတောင်းပန်တဲ့ စာအရှည်တစ်စောင်ကိုပို့ခဲ့ပါတယ်… ‘Dispatch’ ကKim Seon Ho … Read more
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လှပလာခဲ့တဲ့ DOTSဇာတ်လမ်းထဲက မင်းသမီးလေးZyon Barreto
2016ခုနှစ်က အကောင်းဆုံးDramaတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Descendants of the sunကိုလူတိုင်းကြည့်ဖူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းမှာဆိုရင် Song Joong Ki နဲ့ Song Hye Kyoတို့ (၂)ဦးက အဓိက ဇာတ်ကောင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၎င်း ဒရမ်မာ သည် ထိုနှစ်တွင် အရမ်း နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး တောင်ကိုးရီးယားတစ်ခွင်လုံး အထင်ကြီးလောက်စရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဒရာမာဟာ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Descendants of the sunဇာတ်လမ်းမှာ Fatimaအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ကောင်မလေးလေးZyon Barretoအကြောင်း ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်မလေးကိုလူတိုင်းမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူမကို ဇွန် 21၊ 2002 တွင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှ မွေးဖွားပါတယ်။ ယခုအခါ Zyon Barreto ၏အသက်သည် 19 နှစ်ရှိပြီပဲ … Read more
‘Running Man’ ရဲ့ ‘Squid Game’ မှာသူမရဲ့ကံတရားနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို အံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့ Song Jihyo
အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Running Man အပိုင်းသစ်မှာ အဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူ ITZY’s Yeji, BIBI, WJSN’s Luda နဲ့ MC Minzy (Jeong Junha) တို့ကဧည့်သည်တော်အနေနဲ့ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုကတော့ လက်ရှိနာမည်ကျော်ကြားနေတဲ့ ‘Squid Game’ ကိုပုံစံယူပြီး ဂိမ်းတစ်ခုဖန်တီးထားတာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းမှာတော့ ကိုယ့်ရှေ့ကရှိတဲ့ ပျဉ်ချပ်နှစ်ချပ်ထဲက သစ်သားနဲ့လုပ်ထားတာရယ် ဖော့နဲ့လုပ်ထားတာရယ်ကိုရွေးချယ်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားရမှာပါ။ ဒီဂိမ်းမှာ ပထမဆုံးသွားရတာက Yoo Jaesuk ဖြစ်ပြီး ဒုတိယမြောက်အချပ်မှာတင် ပြုတ်ကျသွားလို့ များများမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Yoo Jaesuk နောက်မှာတော့ Jihyo အလှည့်ဖြစ်ပြီး Jihyo ရဲ့ကံတရားကတော့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကိုပါ အံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါ။သူမက ရှေ့ကပျဉ်ချပ်တွေကို ၇ ခါတိတိမှန်ကန်အောင်ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သင်္ချာစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲလိုမှန်အောင်ခန့်မှန်းနိုင်ခြေက … Read more